Ikhaya le-Cozy Woods - I-Airbnb
Ikhaya le-Cozy Woods
Sestriere, Piemonte, i-Italy
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Giulia
Le chalet ebukekayo yokhuni ezungezwe imvelo ifakwe yonke into oyidingayo ukuze uhlale kahle.
Ifakwe ngaphakathi kwendawo yokukhempa, ifakwe imibhede emi-4: umbhede osofa abayindlovukazi ophindwe kabili nombhede omkhulu, ikhabethe lezingubo, ikhishi nendawo yokugezela (eneshawa nokomisa izinwele).
Imithambeka yendawo ye-Via Lattea ingafinyelelwa ngezinyawo (400 m) noma nge-shuttle yehhotela.
Ngaphakathi kwendawo yokukhempa, ungasebenzisa izindawo ezivamile (inkundla yokudlala yezingane, indawo yokosa inyama, njll.), kanye negumbi lenkonzo elisha elinethezekile lapho ungathola khona amashawa ashisayo amahhala, umshini wokuwasha, umshini wokomisa ngisho nama-saunas aseFinnish. imali). Futhi endaweni yokucima ukoma / igumbi elitholakala kuzivakashi zesakhiwo imishini yokuthengisa yeziphuzo ezishisayo neziphuzo ezibandayo, okhilimu baka-ayisikhilimu nama-croissants anephunga elimnandi lapho ubhukisiwe.
Ngesikhathi reception, lapho kuyadingeka ukuze abonise omazisi futhi ukhokhe intela izivakashi (1 € ngosuku abadala), uzothola lonke ulwazi kanye mhlawumbe ngosizo oludingekayo, wena Uyophinde unikezwe ibheji ukungena okuzenzakalelayo ngesikhathi indawo yokukhempa enediphozithi engu-€ 5 ibheji ngalinye.
Ngeshwa, ngenxa yezizathu zokuphepha, akunakwenzeka ukungena ngemoto, kodwa kungenzeka ukupaka endaweni yokupaka yamahhala eseduze futhi usebenzise inqola yemithwalo.
4.53 · 15 okushiwo abanye
Hlola ezinye izinketho ezise- Sestriere namaphethelo